အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ မပြီးပြတ်သေးမှုတွေကြောင့် လာမယ့် ၂၀၂၂ အထိ နှောင့်နှေးသွား ရတော့ မယ့် Tesla Roadster ! – MyMedia Myanmar
အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ မပြီးပြတ်သေးမှုတွေကြောင့် လာမယ့် ၂၀၂၂ အထိ နှောင့်နှေးသွား ရတော့ မယ့် Tesla Roadster !
ဒုတိယမြောက် မျိုးဆက်သစ် ကားအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာဖို့ ရှိနေတဲ့ Tesla Roadster အသစ် ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ကတည်းက စတင်ကာ ထုတ်လုပ်ရေးတွေ စတင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းအခုဆိုရင်ကားကို စတင်မိတ်ဆက် ပေးလာဖို့ အတွက် အချိန် နီးကပ် လာပြီလို့ ယူဆရပေမယ့်လည်း နောက်ထပ် သတင်းတစ်ရပ်ကတော့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပြီပါပြီ။ အဲ့ဒါကတော့ အဆိုပါ ကားကိုလာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်လောက် အထိ ထုတ်လုပ်ရေးတွေ စတင်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO Elon Musk ကတော့ ဆိုလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Roadster ရဲ့ တိုးတက်မှု အခြေအနေနဲ့ ပက်သက်ပြီး Twitter မှာ မေးမြန်းထားတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို တော့ Musk က ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ရာမှာ အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာတွေ အခုနှစ်ထဲ ပြီးဆုံးမှသာ နောက်လာမယ့် နှစ်မှာပဲ စတင်ထုတ် လုပ်နေမယ်လို့ ဆိုထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါကားရဲ့ အကြို ဒီဇိုင်း ပိုင်းကိုတော့လာမယ့် နွေရာသီနှောင်းပိုင်းလောက်မှာ စတင်ပြသနိုင်ဖို့တော့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ လည်း ဆိုထားခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Musk က ထပ်မံ ပြောကြားရာမှာတော့ Tri-Motor Drive System နဲ့ အဆင့်မြှင့် ဘက်ထရီ လုပ်ငန်းပိုင်း‌တွေဟာ ပိုပြီး အရေးပါ တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ Model S နဲ့ Model X တို့ရဲ့ Plaid Version တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ရှိတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Powertrain တွေကို ရည်ညွှန်းချင်ပုံလည်း ရပါတယ်။ အဆိုပါ Roadster ရဲ့ ဒုတိယ မြောက် မျိုးဆက်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ စတင် ထုတ်လုပ် ခဲ့ရာမှာ Tesla အနေနဲ့ ၁.၉ စက္ကန့် လောက် အတွင်းမှာတင် ၀ ကနေ ၆၀ mph လောက် အထိကို ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၄.၂ စက္ကန့် အတွင်းမှာတင် ၁၀၀ mph အထိ မောင်းနှင်နိုင်အောင်လို့ ဖန်တီးပေး နိုင်ခဲ့ကာ အမြင့်ဆုံး စွမ်း ဆောင်ရည် အနေနဲ့ကတော့ ၂၅၀ mph အထိကို ရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားရဲ့ 200 kW ရှိတဲ့ ဘက်ထရီ Pack အသစ်ကတော့ 620 မိုင် လောက် Range အထိ ရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေး နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ အမြဲတမ်း ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီး မား မားနဲ့ ထူးထူးခြားခြား လုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ Elon Musk ကတော့ အဆိုပါ ကားကို ပိုပြီး အရှိန်မြှင့် တင် နိုင်ဖို့ အတွက် Rocket တွေတောင် တပ်ဆင်ဖို့ ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Tesla ကတော့ အဆိုပါ Standard Roadster ကိုတော့ Base Price အနေနဲ့ $ 200,000 လောက် ကနေ စတင် ရောင်းချ ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Limited-Edition Founder Series Model ကိုတော့ $ 250,000 လောက်နဲ့ ရောင်းချခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ကားနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေ ကိုနိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ လောက် ကတည်းကစတင်လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Standard Roadster ကို တော့ $ 50,000 Deposit နဲ့ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ကာ Founders Series Roadster ကိုတော့ $ 250,000 လောက်နဲ့ စတင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Deadline တွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အချိန်မမှီ ဖြစ်လေ့ ရှိတာဟာ Tesla ရဲ့ ပုံစံတစ်ရပ်လိုတောင် ဖြစ်နေခဲ့ပြီး အခုလိုမျိုး Roadster နောက်ကျမယ်ဆိုတာ လည်း သိပ် အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်တော့ ပြန်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၀၂၀ တုန်းကတော့ Musk က ပြောကြားရာမှာ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ Supercar တွေကိုတော့ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက်ကတော့ နှစ်အနည်းငယ် လောက် လိုအပ်ဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ Tesla ကတော့ အခုလက်ရှိ အချိန်မှာ စီမံကိန်း အသစ် တွေကြားထဲ မှာ ရုန်းကန်နေရတာ ဖြစ်ပြီး Roadster အပြင် Cybertruck နဲ့ Semi တို့ကိုလည်း ဖန်တီးနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ကာ ဂျာမနီနိုင်ငံနဲ့ တက္ကဆက် ပြည်နယ်တို့မှာ ထုတ်လုပ် နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ မပြီးပြတ်သေးမှုတွေကြောင့် လာမယ့် ၂၀၂၂ အထိ နှောင့်နှေးသွား ရတော့ မယ့် Tesla Roadster ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-31T17:30:43+06:30January 31st, 2021|MYCARS MYANMAR|